Ny Galaxy Fold dia vonona hamely ny tsena | Androidsis
Ny famoahana ny Galaxy Fold eny an-tsena dia mitohy miteraka vaovao marobe, amin'ny fotoana tsy ahafantarantsika intsony izay marina na tsia. Taorinan'ny tsaho niely nandritra ny herinandro maro, dia fantatra fa tamin'ny herinandro lasa teo Ny vonona an'i Samsung dia tsy vonona, noho izany ny famoahana azy dia tsy hatao amin'ny Jona na Jolay. Fa kosa, maharitra roa volana farafahakeliny ny famoahana azy eny an-tsena.
Vaovao iray izay tonga fotoana fohy taorian'izay voalaza fa tena vonona tokoa ity finday ity ary ho tonga amin'ny volana jolay. Ankehitriny, rehefa efa noraisina ho azy fa hitaky fotoana lava kokoa vao hidona amin'ny tsena ny Galaxy Fold, mpanatanteraka iray avy amin'ny Samsung milaza fa efa vonona ny handefa ny telefaona izao.
Ny filoha lefitry ny Samsung Display no nilaza izany ny Galaxy Fold dia vonona hapetraka amin'ny tsena ankehitriny. Naneho hevitra ihany koa izy fa ny ankamaroan'ny olan'ny fampisehoana dia namboarina tamin'ny telefaona. Vonona daholo ny zava-drehetra amin'ny farany amin'ny alàlan'ny fivarotana.
Midika izany fa manana i Samsung nahavita nanamboatra ireo olana tamin'ny efijery an'ny telefaona. Na dia amin'izao fotoana izao aza tsy fantatsika raha nisy fiovana bebe kokoa, ankoatr'ireo voalaza herinandro lasa izay. Vaovao mahafaly anefa ny maheno fa efa vonona ny fitaovana.
Afaka nanana izany ny Galaxy Fold daty famotsorana tsy ho ela. Ny media sasany dia milaza fa halefa alohan'ny Galaxy Note 10, izay antenaina haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny fiandohan'ny aogositra. Noho izany, raha marina dia tsy maintsy hahatratra ny tsena ao anatin'ny roa volana latsaka.
Na izany na tsy izany, manantena izahay fa hihaino anao vetivety. amin'ny fanombohana ny Galaxy Fold. Ity finday ity dia marary an-doha amin'ny marika koreana. Ka tsy isalasalana fa ho fotoana lehibe ho an'ny Samsung ny fandefasana azy. Hihaino tsara isika amin'izao andro izao mandra-panamafisana bebe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny Galaxy Fold dia efa vonona ny hanomboka
Ny LG V50 ThinQ 5G dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana